Bhurawuza nenzira yaunoda neSafari "marongero ewebsite ino" ye macOS High Sierra | Ndinobva mac
Kwemaawa mashoma isu tine pakati pedu iyo yakasarudzika vhezheni ye macOS High Sierra, nezvose zvakaziviswa mabasa. Kunyangwe kwemazuva mashoma tave "tichipwanya" iyo Golden Master vhezheni, iyo, kunze kwekugadziriswa kweminiti yekupedzisira, inofanira kunge iri yekupedzisira vhezheni yatinogona kurodha pasi zuro. Iyi sisitimu inouya kunatsiridza macOS Sierra, asi isu hatifanire kukanganwa kuti inounza maficha nyowani ayo anoita kuti ive yakasimba uye inogadzirika sisitimu.
Rimwe remabasa aya isimba gadzirisa peji rega rega rewebhu zvakasiyana. Pane peji rimwe chete tinogona kufarira zvinyorwa, pane imwe zvione pane saizi chaiyo. Ngatione kuti tingaite sei kugadzirisa yega yega webhusaiti zvakasiyana neMacOS High Sierra.
Parizvino sarudzo yacho yakavanzwa semi, saka, chinhu chekutanga kuita kuiwana. Kuti uite izvi, pinda peji raunoda kugadzirisa uye kana wangoiswa, tinya pane bar yemenu muSafari, kumusoro kuruboshwe. Mune inotevera menyu, iwe unofanirwa kumanikidza zvigadziriso zvewebsite ino ... Tevere, menyu ichavhura pazasi pebhawa kero kuti ushandise ino chaiyo peji, ichisiya iyo yekumisikidza marongero emamwe mapeji asara.
Sarudzo dzatinadzo dzichava dzinotevera:
Shandisa muverengi kana zviripo: Iri basa rinoitisa kuti muverengi aone chero nguva painowanikwa. Semuenzaniso: iro hombe peji reNdiri paMac rinovhura senguva dzose, asi kudzvanya pane chinyorwa chinoivhura yakananga pakuona kwemaverengi Izvo zvakakwana kuchengetedza nguva kana tichida iyi sarudzo yekuverenga.
Gonesa zvemukati blockers: ndiro chete basa rinogoneswa nekutadza. Kunyangwe ichishoropodzwa nemapeji akati wandei, inodzivirira kupesana kunogumbura muchimiro chekushambadzira.
Zoom: inokutendera iwe kugadzirisa zoom yeiyo peji kune yako kufarira.
Autoplay: ine zvigaro zvitatu:
Hapana ruzha rwunogadzirwa zvakare, asi mavhidhiyo akatakurwa uye panogona kunge paine iwo otomatiki.
Usatombotamba chero chinhu otomatiki.
Pakupedzisira, gadzira kuwana kune: kamera, maikorofoni nenzvimbo (Nzvimbo). Muvatatu vese, tinogona kutaurira Safari kuti itibvunze nguva dzese, kuramba mvumo, kana kugara uchibvumira.
Iyi sarudzo nyowani inoita kuti hupenyu huve nyore kwatiri. Zvichida chete chinhu chatinokumbira kuApple kugonesa mushanduro dzapashure nzira yekhibhodi kune avo vanoda kugadzirisa peji riri mubvunzo nguva dzese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Famba nenzira yaunoda ne Safari 'marongero ewebsite ino' ye macOS High Sierra
Mario Benedict akadaro
Mhoro: zvingave zviri izvo kuti mafaera ese mafaira angu akauya nekusarudzika mune yekuwana macOS Sierra, haauye zvakanyanya mu macOS yakakwira Sierra?.
Pindura kuna Mario Benedetto